मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की मीना लामा निर्वाचित भएकी छन्। सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी लामाले २३ हजार ‍८० मत प्राप्त गरेकी छन्।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार मीना लामालाई मतगणना नसकिंदै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले बधाई दिएका छन्।
हेटौंडामा गठबन्धन उम्मेदवार मीना लामा १४७१ मतले अगाडि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनकी उम्मेदवारले अग्रता कायमै राखेकी छन्।
मकवानपुरको मनहरीमा मतगणना स्थगित मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा मतगणना स्थगन गरिएको छ। मतपेटिकालाई कपडाले नढाकेको भन्दै विवाद भएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्म गणना रोकिएको निर्वाचन अधिकृत पूर्णबहादुर दर्जीले बताए।
हेटौंडा उपमहानगरमा राप्रपाका सिंहलाई १९८ मतको अग्रता मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्।
मकवानपुरगढीमा विवाद, मतगणना रोकियो मतगणनामा सहभागी कर्मचारीका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा मतगणना रोकिएको छ।
मकवानपुरमा मतगणना शुरू, गठबन्धनको अग्रता मकवानपुरमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को मतगणना शुरू भएको छ।
आज चुनाव, मतदाता बिहानैदेखि मतदान केन्द्रमा आज स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ भने मतदाता भोट हाल्न बिहानै मतदान स्थलमा पुगेका छन्।
मकवानपुरमा कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप, दुई जना घाइते मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। झडपमा दुई जना घाइते भएका छन्।
प्रि-मनसुनमा चट्याङको जोखिम, कसरी जोगिने? प्रि-मनसुन अर्थात चैत, वैशाख र जेठमा चुरे क्षेत्र तथा बङ्गालको खाडी नजिकका भूभागमा चट्याङ पर्ने सम्भावना धेरै हुने भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
गठबन्धनले चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ: ओली नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले अझै पनि चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
बक्सिङको रिङ छाडेर चुनावी मैदानमा सुशील प्रतिस्पर्धाका लागि सधैं बक्सिङको ‘रिङ’ मा उत्रिंदै आएका सुशील यस पटक भने चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति जोशी निलम्बित
बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. विश्वराज जोशीलाई निलम्बन गरेको छ।
हेटौंडाको मेयरमा गठबन्धनबाट मीना लामा उम्मेदवार
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट मीनाकुमारी लामा उम्मेदवार बन्ने भएकी छन्।
भरतपुरको मेयरमा चुनाव लड्न सांसदबाट राजीनामा
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्न बागमती प्रदेश सभा सदस्य विजय सुवेदीले राजीनामा दिएका छन्।
हेटौंडामा पुरुषलाई उपमेयर नदिन कांग्रेस नेत्रीहरूको माग हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पुरुषलाई उपमेयरको उम्मेदवार नबनाउन नेपाली कांग्रेसका नेत्रीहरूले माग गरेका छन्।
हेटौंडामा एमालेसँग राप्रपा नेपालले माग्यो उपमेयर स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेटौंंडा उपमहानगरपालिकामा नेकपा (एमाले) र राप्रपा नेपालबीच तालमेलको तयारी चलेको छ।
गर्भपतन: शरीर महिलाको निर्णय पुरुषको स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतनका लागि परिवारको सहमति खोज्ने र परिवारका सदस्य सहजै गर्भपतन गर्न सहमत नहुँदा महिलाले पाएको कानूनी अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
कांग्रेस मकवानपुर सभापतिमा बुद्ध लामा नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको जिल्ला सभापतिमा बुद्ध लामा चयन भएका छन्।
बागमतीका दुई संसदीय समितिमा चुनाव हुँदै, एमाले सांसदको मात्रै उम्मेदवारी बागमती प्रदेश सभाका दुई समितिको नेतृत्व चयनका लागि आज चुनाव हुँदै छ। यसमा नेकपा (एमाले) का सांसदको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ।
बागमतीबाट सत्तारूढ गठबन्धनका दुवै उम्मेदवार विजयी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट सत्तारूढ गठबन्धनका दुवै उम्मेदवार विजयी भएका छन्।